Nnukwu Mpempe Eserese Eletriki Nnukwu-BAM.
Nnukwu igbe mmachi igbe
Akwukwo Ihe Odidere
Know maara igbe nnwale na-enwu enyo na-adịkarị mgbe niile ma ọ ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi? Ọ bụrụ n’ịchọta gburugburu, ọtụtụ ngwaahịa na-emebi emebi na-esighi ike na-ekpuchi n'ime igbe mmịfe ka ha dị nchebe ma nwee nnukwu nchekwa iburu. Ọ bụrụ n ’ị chee na ngwa ahịa gị ma ọ bụ nke ugbu a chọrọ ịkpachara anya maka nchekwa, elepụla anya. Akwukwo a haziri ahazi nke eji emebe ihe bu ezigbo mma na anya maka anya. Emere ya na agba ọcha na akwụkwọ ndị mara mma na-eme ka igbe a dị mma. Nwere ike iji ya maka ọtụtụ nkwakọ. Dịka ọmụmaatụ, ekwentị mkpanaka, obere akpa, belts na ọtụtụ ndị ọzọ. You nwere ike tinye karama mmanụ n’ime.
N'ihi ogo dị elu a na-enye site na igbe nnụnụ na-enwu enyo dị arọ, ọ bụ ihe a na-apụghị iguzogide. Kwesịrị ịzụta iji mara ya. Ọ nwere ike idozi igbe nke enwere ike ịhazi gị dịka nhọrọ gị. Ọ karịrị ahia ahia.
Igbe dị omimi mara mma nke eji achọ mma bụ naanị ihe ịchọrọ ma ọ bụrụ na ọ bụ maka ịchebe onyinye gị na-emebi emebi tupu ị nye ya onye pụrụ iche. Ọ ga-eju gị anya na ihu onye ahụ na-enweta igbe nkwakọ ngwaahịa ahụ. Ọ dị ka nke eze ma ọ ga - ahapụ otu ịma mma nke ugbu a n'ime. Gaghị agbaghara mgbanwe ahụ iji mee ka mmadụ nwee mmasị na ya nanị site n’inye ha onyinye igbe ahaziri iche. Ezọ eco-enyi na enyi ị ga-ekwu na ị hụrụ n'anya.